I-ECO-VILA, ibheke olwandle. kitesurf futhi uphumule - I-Airbnb
I-ECO-VILA, ibheke olwandle. kitesurf futhi uphumule
Trairi, Ceará, i-Brazil
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Jonás
Iholide elimnandi i-Eco-Vila, 2km ukusuka endaweni yokudoba i-Mundaú, nje i-1.30h ukusuka esikhumulweni sezindiza sase-Fortaleza.
Indlu itholakala phambi kolwandle, lapho kukhona i-barrier reef enkulu kunazo zonke kulo lonke ugu, evikela ulwandle lapho igagasi liphansi futhi ikuvumela ukuba ugeze ngokuphepha okuphelele, ikakhulukazi ezinganeni, asebekhulile kanye nabantu. kanzima ekuhambeni nokulinganisela. Indlu iphambi kwamachibi emvelo. Ilungele i-kitesurfing
Indlu ibheke olwandle, ogwini lolwandle. Epulazini, ungaba nama-barbecues futhi udlale i-volleyball.
Lapho igagasi likhuphuka, ungazijwayeza i-kitesurfing nemidlalo yomoya. Lapho igagasi liphansi ungakwazi ukuzijwayeza i-snoker, ukudoba, ukuthwebula izithombe. Izindunduma nomfula kuyimizuzu eyi-10 ukusuka endlini.
Umbhede olala umuntu oyedwa o-1, imibhede yenetha engu-1
Indlu iyi-2km ukusuka edolobheni laseMundaú, cishe imizuzu eyi-15 ukuhamba ngasogwini lolwandle. Inomakhelwane kuyo, ikhaya lokuphumula kanye nendawo yokuzilibazisa lapho ungathola khona isidlo sasemini nesidlo sakusihlwa uma uthanda.
Umnikazi wendawo kanye nomphathi wale ndlu bazotholakala ukuze bakusize noma nini